China 350L / 450L Tilt Truck –B-110A / B-110B ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Jinqiu
450L na 350L nnukwu ikike.
Ugboro abụọ buru ibu ma sie ike na-agagharị mfe ma na-enweghị nsogbu.
Sloping imewe na-eme ka ọ dịkwuo mfe ahihia ịpụta.
Akwa-graded plastic ihe ọzọ mfe ọcha.
Ọ na-abụkarị mpaghara niile ga-achịkọta obere akpa mkpofu ma ọ bụ nnukwu, ha kwesịrị ịkwaga na ebe mkpofu ahịhịa, mana ha dị oke oke ma buru oke ibu, mgbe ahụ, anyị ga-achọ gwongworo tilt. Nhazi nke ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ bụ iji dozie nsogbu nke ihe mkpofu dị arọ na nke dị arọ iji mee ka nnukwu ihe mkpofu buru ibu gaa ebe mkpofu ha.
A na-eji ngwongwo plastik mee njem gwongworo tilt nke na-eme ka gwongworo na-adị mfe ma dị ọnụ ala karịa igwe.
Njirimara nke ụgbọala tilt bụ nnukwu usoro ha na nnukwu ikike iji rụọ ọrụ dị arọ. Ejiri ikike 350L na 450L dị iche iche dị iche iche ebe a, nke na-eme ka ha zuo oke maka ojiji na nnukwu ikike ntọala.
Njirimara nke ụgbọ ala ahụ bụ ergonomic design, nke na-eme ka arụmọrụ dị mma ma belata nrụgide mgbe ị na-ebugharị ihe dị arọ. Nwere ike iji ngwaahịa ndị a bugara ihe na azụmaahịa ma ọ bụ chịkọta ihe mkpofu ma bufee gị ahịhịa.
Na mgbakwunye, ndị a tilt trọl Njirimara oké-ọrụ casters, na-eme ka ọ dị mfe ịgbanwe gwongworo na gị nkwakọba ma ọ bụ ulo oru gburugburu ebe obibi.
Nke kachasị mkpa, ụgbọ ala anyị dị mfe dị ọcha, ị nwere ike ịsacha ya na sooks mgbe ejiri ya.
Companylọ ọrụ anyị nwere ike ịnye ọtụtụ mkpofu ahihia, gwongworo ahihia, ebe a na-ekpofu ihe na agba dị iche iche, ikike na ụdị. Na nke kacha mma ngwaọrụ na ezu ibu iji hụ anụ quality, anyị na-obiọma na-anabata gị ase, ị ga-enweta a ezi uche price si anyị.
Nke gara aga: 58L Waste Akwụkwọ mkpokọta Bin-B-016A / B-016B / B-016C
Osote: 660L n'èzí ahihia ahihia-B109
N'èzí Rolling ahihia Bin
Plastic mkpofu Bin